Ugu Weyn Ee Orchid
Bletilla Orchid: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaatid daryeelka sii kordhaya iyo habboon
Waxaa laga yaabaa in riyooyin kasta oo beerta ah oo ubax ah oo noqon lahaa mid cajiib ah oo qurux badan oo waqti isku mid ah aan qabin xaaladaha cimilada, oo aan ka dooran karno daryeel taxadar leh. Nasiib wanaag, waxaa jira warshad noocaas ah, oo waxaad ka iibsan kartaa, laga yaabee, dukaanka ubaxa oo dhan - tani waa Orliska Billyilla. Dabeecadda, ubaxani wuxuu ku koraa Bariga Bariga, ee Shiinaha iyo Japan.
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato daryeelka dendrobium ee guriga
Orodka Dendrobium waa dakhliyada ka mid ah qoyska Orchid iyo tirinta in ka badan kun nooc. "Ku noolaanshaha geedka" - waa sida uu magaca uga tarjumayo Giriigta. Dendrobium oo ku yaal deegaankiisa dabiiciga ah wuxuu u eg yahay orchid hawada, epiphyde, waxaana jira lithophytes aan caadi ahayn, taas oo ah, sii kordhaya dhagxaanta. Dendrobium Homeland waa kaymaha kulaylaha ee New Guinea, Australia, China, Japan.
Maxaa la sameeyaa haddii caleemaha Oralida ee Phalaenopsis ay u engegaan, sababaha ugu wayn ee isdilidda
Orchidopsis orchid waa midka ugu quruxda badan oo ugu caansan ee orchid-guriga lagu sameeyey. Dhirta cajiibka ah waxay ka duwan yihiin ubaxyada kale ee guriga, waxayna u baahan yihiin daryeel gaar ah. Meel walba oo aad ka hesho orodka Phalaenopsis, ma dhibayso in lagu xareeyo karantiilkeeda bilaash ah oo kaliya marka laga reebo wakiillada kale ee aqalka aqalka dhirta lagu koriyo.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Orchid 2020